Into enhle kwaye kulula ukuyisebenzisa ayilula. Ekuqaleni kwekhulu leshumi elinesihlanu, ukugqithiswa kwintlalo yabantu kubonakala, kwaye ekupheleni kwekhulu leminyaka umsebenzi omkhulu "Umntu nokuhamba kwakhe" wapapashwa. Kwaye akukhona nje kuphela izazinzulu ezichaphazelekayo kule ngxaki. Ngomnyaka we-1833, incwadi yomlobi waseFransi kunye nomcebisi u-Honore de Balzac "Ukubala kweengxelo malunga nomxholo womntu" kwapapashwa. Le ncwadi yabhalwa ngokuhleka kunye nolwazi. Kulo, uBalzac ubhala ukuba ngelo xesha iincwadi zibhalwa malunga nokugqithwa kwezilwandle nolwandle, imithetho yokunyuswa kwamaqela asezulwini, kodwa akukho namnye obhaliweyo malunga nesihloko esibalulekileyo nesinomdla ngokuhamba komntu.
Namhlanje, umfazi wesimanje kufuneka akwazi ukuhamba kakuhle kwaye ngokuhle. Ukuhamba kulungile kwimidlalo efikeleleke kakhulu kuthi, njengoko sisoloko sinalo ixesha elaneleyo lokuphumla. Kufana nokusetyenziswa kwentsasa, abantu abaninzi abachitha ixesha lokuhlala. Kukulungele ukuhamba ngomoya ophelileyo, obuye usetyenzisele umzimba: imiphunga iphefumlelwe umoya, zonke iimisipha zomsebenzi womzimba kunye nokwanda kwegazi.
Yeka ukuhamba kuyimfuneko ukubeka ngqo, ukuba iminwe ayizange iphenduke. Okokuqala, umhlaba kufuneka uthinte isithende okanye isithende, iinzwane aziyikukhupha, kodwa ziphakanyiswe. Kufuneka uhambe inyathelo eliqhelekileyo, alikhulu kwaye alilincinci, ukwenzela ukuba inyathelo lihambelana nokukhula kwalo. Xa uhamba ngeenyawo zakho, idolo lifanele lilungiswe.
Abasetyhini abaninzi xa behamba ngeentendelezo eziphezulu kakhulu banxiba ngamadolo. Ukusuka ngaphandle akukhangeleli kakhulu. Ngokuhamba okunjalo, intombazana encinci ibonakala idala.
Xa uhamba umlenze uhamba kancane kwaye uhla. Umlenze ukhuphuka ngethuba xa umlenze oxhasayo udlula, kwaye wehla xa isinyathelo esilandelayo sithinta umhlaba. Umqolo kufuneka ulungele xa uhamba, intloko iphakanyisiwe, iingalo zilungelelaniswe kwiingqungquthela. Awukwazi ukuthwala ubunzima, umzekelo, isikhwama sokutya, ngakwesinye icala. Ngexesha elifanayo, i-silhouette yakho ihlupheka: elinye ipaliti liphezulu kunomnye kwaye umgudu uphazamisekile. Kubalulekile ukusabalalisa ubunzima kwizandla zombini okanye ngokuphindaphindiweyo ukusuka kwesinye isandla ukuya kwesinye.
Inyathelo xa uhamba kufuneka kube lula, ukukhawuleza nokukhawuleza. Kungcono ukugqoka izithende eziphakamileyo, kuba xa uhamba ezinjalo izicathulo, umlenze usemajameni angavamile. Izicathulo eziphakanyisiweyo zokuhamba ngeenyawo ezisezantsi. Kufuneka ugqoke i-slippers ezenzekelayo ekhaya.
Ngokuqhelekileyo, kwaye okubaluleke kakhulu, ukunakekelwa kwenyawo olufanelekileyo kukubaluleke kakhulu kwiinyawo zakho kwaye kuyingxenye yoqeqesho lwentsebenzo enhle.
Ubuncinane kanye ngeveki, kufuneka wenze amabhati okuhamba ngeenyawo ezingama-20. Kubalulekile ngexesha lokuhlambela ukususa iipumice indawo ezinzima kunye neengcambu zeenyawo zixubha ukhilimu omncinci. Zama ukwenza konke oku xa unemilenze ekhathele, kwaye uya kuziva ukuba uzalwe ngokutsha.
Uqeqesho lokufumana imali kufuneka lubandakanye iindlela ezininzi ezilula:
Hamba kwindawo ngaphandle kokuthatha imilenze phantsi. Ukunyuka kwindawo yokuqala - imilenze okanye iifoto kufuneka zifakwe ububanzi be-brachium. Ukuphakamisa isithende somlenze wesobunxele, uze ucinezele iminwe phantsi. Emva koko ngaphantsi kwesokunxele uze uphakamise isithende sokunene. Izinzwane aziphangeli kwakhona. Yenza okufanayo ngomnye umlenze. Ibhokisi lomlenze wokuma kufuneka liqonde, kwaye iphakanyisiwe enye. Izandla mazibe zilungele kwiijaji kwaye zihambe ngokuchukumisa ngeenyawo zazo. Ukuzivocavoca ukwenza ngokukhawuleza.
Ukunyuswa kwesetyhula kwenyawo. Kulo msebenzi, kufuneka uhlale esihlalweni kwaye ubeke unyawo lwakho emlenzeni. Omnye unyawo ongezantsi, uchaza iindidi ezinkulu kunye nobubanzi. Ikhefu elinesibini kwicala lasekhohlo, kwaye ngoko kwinombolo efanayo ngakwesokudla. Yenza okufanayo ngomnye umlenze.
Ukuhamba nomthwalo entloko yakho. Lo msebenzi uncedo kuba unokusetyenziselwa phantse yonke indawo kunye nayiphi na imzuzu, ngaphandle kokunika ixesha elikhethekileyo. Phezulu kwentloko kufuneka ubeke incwadi. Akufanele kube lula, kodwa kungabi nzima. Hambisa kancane. Lo msebenzi uhlose ubuhle bentombazana kwaye uthathwa njengowokudala.
Ukuzivocavoca ekuhambeni. Lo msebenzi kufuneka wenziwe ngexesha lokuhamba, umzekelo, xa uhamba ngeenxa zonke. Amanyathelo amane okwenza kwizithende, zibe ezine kwizontwane, ukunyuka ngokuphakamileyo kunokwenzeka, koko ezine ezineqhelekileyo.
Kwakhona, umntu akafanele akhohlwe malunga nokunceda ukuhamba ngokukodwa abantu abachitha ixesha elininzi behleli. Ukuhamba okunjalo kuya kunceda izihlunu zingene ngokukhawuleza ithoni, cima imiphunga uze uqinise intliziyo. Kuhamba kwakhona, ngokuhlwa ngokuhlwa, kunempembelelo enobungakanani bomgangatho wobuthongo.
Ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba ukungahambi kakuhle nokubi, isakhelo senziwa ngokungakhuselekanga kuye. Yonke intokazi kufuneka ikwazi ukuba iyona eyona nto ibhelelekileyo kwaye iyabonakala, kwaye ukuqeqesha i-gait enhle kunye nechanekileyo incike ngokupheleleyo kwiminqweno yakhe.
I-Scarlet lipstick yinto ekhangelekayo yobuhle-2017
Indlela yokuhlala eselula
Uhlobo lwe-Photoshop-up-up: I-TOP-3 zixhobo zokubonakala ngokugqibeleleyo
Ukufunda indlela yokujonga phambi kwekhamera
I-Croup ye-sago: izakhiwo, ukwakheka, zokupheka
I-Workaholic syndrome, ukutshayeka kobuchwepheshe
I-pasta ebisiweyo kunye ne-sausage kunye neetatayi
Ukuphuhliswa komntu wesifazane kwintsapho
Isondo nomhlobo omhle
Wena, yena kunye nokuzonwabisa kwakhe
Ikhukhi kunye nekhadiyamom
Ukuzivocavoca nokutya kwinqani elincinci